१३ युवाले निकाले एकैपटक दुवै प्रहरीमा नाम ! - Everest Dainik - News from Nepal
१३ युवाले निकाले एकैपटक दुवै प्रहरीमा नाम !
काठमाडौं, चैत १४ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीद्वारा क्रमशः सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकका लागि लिइएको लिखित÷मौखिक खुला परीक्षामा १३ जना युवाले दुवैतर्फ नाम निकाल्न सफल भएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीद्वारा लिइएको लिखित र मौखिक परीक्षा (अन्तर्वार्ता) मा १३ जना सफल भएका छन् भने नेपाल प्रहरीको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तिनै १३ जनाले मंगलबारदेखि मौखिक परीक्षा (अन्तर्वार्ता) दिइरहेका छन्।
यीमध्ये एक÷एक जनाले आदिवासी÷जनजाति र दलितका साथै ११ जनाले खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेका हुन्। आदिवासी÷जनजातिबाट दीपेन्द्र श्रेष्ठ र दलितबाट देवीदत्त मोतेले नाम निकालेका हुन् । यसै गरी नाम निकाल्न सफल हुनेमा अनिल सुवेदी, अर्जुन पौडेल, जगन्नाथ मरासिनी, दर्शन खड्का, दीपक कुँवर, नीरबहादुर बानिया, प्रदीप पौडेल, यज्ञराज भट्ट, रवीन्द्र चन्द, सुवास खत्री र हरि बराल हुन् ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल प्रहरीबारे जान्नैपर्ने कुराहरु (परीक्षा तयारी र सामान्य जानकारीका लागि विशेष उपयोगी)
ट्याग्स: APF, Nepal police